यस गिरावटको लागि पूर्वावलोकनमा अपराध उपन्यासहरूमा novel उपन्यासहरू वर्तमान साहित्य
म अब गर्मीलाई बिदाइ दिन चाहन्छु (जुन मलाई हरेक वर्ष कम मनपर्दछ), चाहे यो एक भ्रम मात्र हो। यो अझै धेरै तातो छ। तर यसको सामना गर्न, म पहिले नै पहिलो शरदमा हावा सम्झना गर्दछु र जान्छु अपराध उपन्यासहरूको यो चुपचाप जुन अगस्ट र सेप्टेम्बरमा बाहिर आउनेछ।
कडा नाम र अपेक्षित कथाहरू, जस्तै ईवा, को दोस्रो भाग फाल्को गत वर्ष जुन समकालीन क्लासिकमा हस्ताक्षर भएको छ आर्टुरो पेरेज-रिभर्टे। हे अकल्पनीय चुपचाप, सफल र धेरै-अनुसरण गरिएको बर्गमम्यान श्रृंखलामा चौथो शीर्षक। पौराणिक कथाको पाँचौं मिलेनियम यसको नयाँ लेखकको साथ। को अन्तिम शीर्षक रोबर्टो सियियानो र गलबाट नयाँहरू FRANCK थिलिज र अमेरिकी डेविड बाल्डडैक, जो पनि प्रतिज्ञा।
1 इभा - आर्टुरो पेरेज-रिभर्टे
2 त्यो मानिस जसले उसको छाया पछ्यायो - डेभिड लगेरक्रान्ट्ज
3 अकथनीय साइलेन्स - माइकल होजर्थ र हंस रोजेनफेल्ड
4 बाल ब्यान्ड - रोबर्टो सियियानो
5 महामारी - फ्रैंक थिलिएज
6 अन्तिम माइल - डेभिड बालडाकी
ईवा - आर्टुरो पेरेज-रिभर्टे
कार्टाजेना लेखक भर्खरै घोषणा गरे कि अर्को अक्टोबरको लागि 17 बिक्री मा जान्छ ईवा, दोस्रो शीर्षक र साहसिक लोरेन्जो फाल्को। हामीलाई याद छ कि पहिलो आलोचकहरू र जनताले राम्ररी बुझेका थिए र यो नयाँ पात्रमा फर्कन्छ जुन नयाँ कथामा फर्किन्छ तथ्य र काल्पनिक मिश्रण गर्नुहोस्.
हामी मार्चमा छौं 1937। गृहयुद्ध जारी छ र लोरेन्जो फाल्काको नयाँ मिशन छ जो नेतृत्व गर्नेछ Tangier। त्यहाँ हामी फेरि भेट्छौं जासूसहरू नागरिक र गणतन्त्र, अवैध यातायात र षडयन्त्रहरू, फाल्काले पहिले नै झण्डा परिवर्तन गर्न बैंक अफ स्पेनबाट सुनले भरिएको जहाजको कप्तानलाई लिन खोजिरहेका थिए। कुरा बिगार्नको लागि तिनीहरू खतरनाक हुनेछन् भूतका भूतहरू.
त्यो मानिस जसले उसको छायालाई पछ्यायो - डेभिड लगेरक्र्यान्ट्ज
El सेप्टेम्बर 7, एकै साथ विश्वव्यापी सुरुवातमा, श्रृंखलामा पाँचौं किस्त मिलेनियम। उसको पेन अब स्वीडेनको लेखकको हो डेभिड लेगरक्रान्ट्ज जसले समयपूर्व मृत्यु भएको स्टिएग लार्सनको साथको पौराणिक गाथा फेरि शुरू गर्‍यो के मार्दैन जसले तपाईंलाई बलियो बनाउँछ.
यसैले हामी फेरि भेट्छौं लिस्बेथ सलान्डर र पत्रकार मिकाएल ब्लोमकविस्ट अर्को अन्वेषणमा जुन एउटा लाई प्रकाशमा ल्याउन सक्छ धेरै जघन्य प्रयोगहरू अस्सी मा स्वीडेनको सरकार द्वारा अनुमति छ। यो अनुसन्धानले उनीहरूलाई लिओ मनिहेमर, वित्त कम्पनी Alfred Aggren का साझेदारमा लैजान्छ, जससँग लिस्बेथ उनीहरूले सोचे भन्दा धेरै साझा गर्छन्।
अकथनीय साइलेन्सहरू - माइकल होजर्थ र हंस रोजेनफेल्ड
स्विडेनी पटकथा होजोरथ र रोजेनफेल्ड, यस्तो प्रशंसित श्रृंखला को लागी जिम्मेवार वाल्याण्डर o पुल, तिनीहरूले बाहिर लिन्छन् चौथो शीर्षक यो पनि अत्यधिक प्रशंसित बर्गमम्यान श्रृंखला, यसको नायकको उपनाम, धेरै विशेष अनुसन्धानकर्ता सेबस्टियन बर्गम्यान। पछि अपूर्ण रहस्यहरू, नक्कली अपराध y खर्च योग्य, यी आइपुग्छन् अकल्पनीय चुपचाप.
una परिवारको हत्या भएको भेटियो आफ्नै घरमा। को टोर्केल हिलग्रुन्ड अपराध टोली ऊ उक्त केसको इन्चार्ज हो, जसको अनुसन्धान अपराधको मुख्य संदिग्ध व्यक्तिको लास पत्ता लगाएर अझ गाह्रो छ। तर निकोल जीवित छ, दम्पतीको १०-वर्षीय भतिजी, जसको पाइलाले परिवारको घर पछाडि जंगलमा नेतृत्व गर्दछ। बर्गमले उसलाई खोज्नु पर्छ यो ढिलो हुनु अघि।
केटाहरूको ब्यान्ड - रोबर्टो सियियानो
यो प्रकाशित छ अगस्ट यो इटालियन कथा रोबर्टो सियियानो, जो एक इलाकामा फर्किन्छ जुन उसलाई राम्रोसँग थाहा छ कि त्यो यथार्थताको बारेमा बयान गर्न जारी छ जुन अत्यन्त असजिलो छ।
हामी भित्र छौ नेपल्स जहाँ हामी एक भेट्छौं दस बच्चाहरु को समूह जो शहर जित्ने को लागी सेट गर्न को लागी। तिनीहरू निकोलस फियोरिल्लो, उर्फ ​​माराजाको नेतृत्वमा छन्, र उनीहरूले यसमा भाग लिन चाहन्छन् लागुपदार्थको तस्करी र जबरजस्ती चन्दा। केही माफिया परिवारहरूले छोडेको शून्यताको फाइदा उठाउँदै उनीहरूले आफ्नो आरोहण सुरु गर्न पुरानो कुल प्रमुखसँग सहयोग गरे। र शक्ति केवल सम्मान कमाएर, डर रोप्दै र हिंसा लागू गरेर मात्र बलियो बनाइन्छ। तर सबै कुरा छ परिणामहरू.
पाण्डेमिया - फ्रान्क थिलिज
को अन्तिम संवेदना को ध्रुवीय फ्रान्सेली, Thilliez पुलिस एफ को आफ्नो श्रृंखला को लागी एक को लागी एक कोरी बनाईएको छर्याक शार्को र लुसी हेनेबल। यो छ छैठौं योग्यता।
Tres हंस एक द्वारा मृत भेटिएको छ अज्ञात रोग फ्रान्सको उत्तरमा। इन्स्टिट्यूट पाश्चरका अनुसन्धानकर्ता अमान्डिन गुउरिनले अनुसन्धानको जिम्मा लिइन्, जसमा उनले पुलिस जोडी फ्रान्क शार्को र लुसी हेनेबेलसँग मिलेर काम गर्ने छन। तीन तिनीहरूले अनौठो महामारीको सामना गर्नुपर्नेछ यो देश भर फैलदैछ र यसको स्रोत फेला पार्दै।
अन्तिम मिलa - डेभिड बालडाकी
को दोस्रो मामला आमोस डेकर, अद्वितीय मुख्य चरित्र, जो ग्रस्त छ हाइपरथिमिया, को कुल मेमोरी।
मेलविन मार्स तपाईंको लागि पर्खँदै छ हिंसात्मक हत्याको लागि कारवाही बीस वर्ष पहिले उनको आमा बुबा बाट। अर्को व्यक्तिले अपराधको अपराधी भएको कुरा स्वीकार गर्दा उनीहरू उसलाई सफाइ दिन्छन्।
आमोस डेकरले यसमा रुचि लिन्छ मंगलवार को पत्ता लागेपछि समानता दुबै साझा: तिनीहरू दुबै प्रतिभाशाली फुटबल खेलाडीहरू थिए जो आशावादी क्यारियरले त्रासदीले बाधा दिएका थिए। उनीहरूका परिवारहरू पनि निर्ममतापूर्वक हत्या गरियो र संयोगवश, अर्को संदिग्ध वर्षौं पछि अपराध स्वीकार गर्न देखाए। तर त्यो श suspect्कास्पद सत्य बोलेको छ ... वा छैन।
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » विधाहरू » कालो उपन्यास » यस गिरावटको लागि एक झलकमा झलक मा अपराध उपन्यास मा6उपन्यास
जोस एन्टोनियो गोन्जालेज भन्यो
म पुस्तकको शीर्षक जान्न चाहन्छु कि माइकल होजर्थ र हंस रोजेनफेल्ड द्वारा अनिवार्य चुपचापहरूको निरन्तरता हुनेछ र जब यो प्रकाशित हुन्छ धन्यवाद
जोसे एन्टोनियो गोन्जालेजलाई जवाफ दिनुहोस्
एउटा उत्कृष्ट पुस्तक उपन्यासहरूको सूचीबाट हराउन नसक्ने एउटा पुस्तक अल्फ्रेडो सेर्नुदाको "ला सेन्टसिमा पुयर्टा" हो। मलाई थाहा छैन तपाईंले कसरी यसबारे कुरा गर्नुभएको छैन यदि मैले पढेको एक उत्तम पुस्तक हो र जुन सबैले कुरा गर्छन।